Waa’ee hiriira mormii fi walitti bu’iinsa uumameerratti hanga ammaa maal beekna? - BBC News Afaan Oromoo
Waa’ee hiriira mormii fi walitti bu’iinsa uumameerratti hanga ammaa maal beekna?
Madda suuraa, Adama City BDK
Guyyaa Kibxata alkan waarii ture xinxalaan siyaasaafi Daarektarri OMN Jawaar Mohaammad eegdoota naaf ramadamanii 'alkaniin kaasuuf' jechuun ergaa midiyaa hawaasummaa isaarratti kan barreesse.
Jawaar konkolaatooti lama naannoo mana jireenyaa isaa dhufuun osoo hin beekne eegdoonni isaa ''meeshaasaanii qabatanii akka bahaniif''akka itti himame ture BBC'tti dubbatateera.
Kana malees eegdoonni maaliif akka kaafaman yoo gaafatan, leenjiif akka deeman akka itti himameefi isaanis alkaniin eegdu bakka osoo hin bunee goodaatti dhiisuun bahuu diduusaanii, isaan booda bilbilaan atattamaan manicha gadhiisanii yoo bahuu baatan addabbiin akka isaan eeggatu itti himamuu ibsameera.
Haaluma kanaanis deeggartoonniifi leellistoonni Jawaar dubbicha hordofaa turan, miidhaan irra gaha jedhanii yaaduudhaan magaalaa Fiinfinnee bakkeewwan garaa garaa irraa bakka manni Jawaar argamu Booleetti walitti qabamuu eegalan.
Akkasumas ganama isaatii kaasee naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessatti dhimma Jawaariin mudate mormuun hiriirri gaggeeffamuu eegale.
Komishinarri Poolisii Federaalaa Indashaaw Xaasaw midiyaa biyya keessaatti dhiyaachuun, eegdoota kaasuun kan duraan eegaleedha. Ammas kan itti fufuudha. Garuu ''mootummaanis ta'e poolisiin tarkaanfiin Jawaar irratti hinfudhatamne'' jedhan.
Kana malees ergaan Jawaar miidhaan narra gahuuf jedhee deeggartoota isaatiif dabarse dogongora jechuun, daandiiwwan cufaman akka saaqaman, sochiileen idilee akka itti fufu jechuun, poolisiin olaantummaa seeraa kabachiisu hojjachu itti fuufa jedhan.
Jawaar BBC'tti akka himeetti, ''egduun kaafamu yoo barbaachise guyyaa raawwatamuu osoo danda'uu, alkan waarii kaasuuf yaaluun haala shakkisisaadha. Kunis maaliif akka raawwatame naafi hingallee'' jedheera.
Kana malees, ''ragaan ani qabu erga eegdoota kaasaniin booda kashilabbootaan mana kiyyarratti miidhaa geessisuuf yaadame akka turedha' jedheera. Kanaafuu yaaliin taasifame ''yaalii ajjeechaa'' akka ta'e himeera.
Guyyaa Roobii sa'aa booda hiriiraan booda walitti bu'iinsaa fi miidhaa qaqqabeen qabeenyaan barbadaa'uufi badiinsi lubbuu gahuu gabaasaaleen bahu eegalan.
Pirezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniin, ''gochi dogongoraa ta'u hinqbaannee raawwatameera'' jechuun motummaan naannichaafi federaalaa nageenya Jawaar akka eegsiisu dubbataniiru.
Pirezidaantichi itti dabaluunis gochi alkan keessa eegdoota kaasuuf taasifame kun maaliif fi eenyuun akka raawwatame akka qulqullaa'u himaniiru.
Walitti bu'insiifi miidhaan bakkeewwan garaa garaatti cimee akka itti fufe dhagahame. Keessattu magaaloota Adaamaafi Ambootti lubbuun namoota hedduu baduu maddaalee adda addatiin mirkanaa'e.
Akkasumas gabaasaa VOA afaan Oromoo Muktaar Jamaaliin dabalatee lammileen hedduun Adaamaatti miidhaa qaamaaf saaxilaman.
Keessattu sababii qaamoolee haala umameetti fayyadamuun dubbicha gara walitti bu'iinsa sabaafi amantaatti geedaruun miidhaa qaqabeen lubbuun namoota kudhii olii baduu BBC mirkanneeffate ture.
Miidhaawwan qaqabaniin namoota du;aniin alatti, namoonni hedduun miidhaa qaamaatiif saaxilamuufi akkasumas badiinsi qabeenyarra qaqabuusaa barameera.
Kamisa sa'aa boodee kaasee jaarsooliin biyyaafi oggantoonni siyaasaa gaaddisa Oromoo jalatti walitti qabaman xinxalaa saiyaasaa Jawaar waliin ta'un, ibsa waloo taasisaniin dargaggoonni hiriira bahaniirraa gara manaatti akka deebii;aniif waamicha taasisan.
Keessattu ergaa Jawaar dargaggootaan dabarseen, ''ammaaf daandiirraa gara manaatti gala, garuu ofi hindagatiinaa'' jedheera.
Sinidoosiin bataskaana Waldaa Ortodoksii Tawaahido Itoophiyaa yaa'ii idilee waggaatiif wal gahee tures, guyyaadhuma Kamisaa ture walitti bu'insiifi miidhaan eddoowwan garaa garaatti babbalchuunsaa akka isaan yaachisee ibsuun kadhannaa guyyaa sadii labsaniiru.
Wa;itti bu'insi umameesi magaaloota akka Adaamaa, Bishooftuu fi Amboo keessa guyyoota lamaaf turuun qabeenyaafi lubbu namootaarraan miidhaa qaqabsisseera.
Eddoowwan kanneenii alattis, Arsii Kofale, Dodolaa, Hararge Bahaa, Dirre Dawaa fi Baalee Roobeetti miidhaawwan raawwatamusaanii madden adda addaarraa mirkanneeffanneera. Bakkeewwan dhiheenya magaalaa Finfinneetti argaman kan akka Sabattaafi walattee fa'ittis miidhaan namootarra qaqabuu BBC'n mirkanneeffateera.
Walumaa galattis, walitti bu'insa guyyoota lamaan duraatiin lubbu dhaban 44 qaqabu madden hospitaalaa, qoondaaltoota motummaafi jirraattota firri jalaa du'erraa irraa BBC'n mirkanneefateera.
Haaluma kanaan walqabatenis naanoolee jeequmsi keessatti cime kan akka Harariifi Dire dhawaatti raayyaan ittisaa akka bobba'uuf gaaffiin dhiyaachusaa, Ministira Ittisaatti Daarektarri Sab-himaa Ummtaa fi Indoktirineshiinii Meejar Janaraal Mahaammad Tasammaa midiyaale biyya keessatti himan.
Bakkeewwan raayyaan ariitiin hinbobba'inittis miidhaan mudachuusaa daarektarri kun himanii ture.
Guyyootuma kanneen keessattis miseensoonni Sinidosii itti aanaa MM Damaqaa Makoonnin, Minisitira Ittisaa Lammaa Magarsaa, Ministira Nagaa Mufariyaat Kaamiil fi Komishinara Poolisii Federaalaa waliin mari'ataniiru.
Mariin kanaanis bakka bu'oonni waldaa kanaa motummaan hojii seera kabachisuu cimse hojiirra akka olchuuf gaafataniiru.
Jimaata gara galgalaa ammo midiyaan Rooyitarsi komishinii poolisii Oromiyaa caqasuun, lakkoofsi namoota walitti bu'insa kanaan lubbu dhaban 67 gahu gabaaseera. Kana malees lakkoofsi namoota miidhaa qaamaatiif saaxilamanii dhibba lamaa ol ta'uus himameera.
Itoophiyaatti Ambaasaadarri Ameerikaa Maayik Raayinar, haala biyyattii keessatti umamee ilaalchisuun fuula feesbukii Imbaasichaa irratti maxxansaniin, ''miidhaafi dubbiiwwan jibbaafi goolii umtummaa tibbana mullataniin'' baayyee nahu kiyyan ibsaniiru. ''Kanneen miidhaa kana keessatti hirmaataniifi kanneen kakaasan cimsinee balaalleeffanna. Gochi akkasiis sababii kamiiyyu dhiyaachuuf hindanda'u,'' jedhaniiru.
Kana malees biyyisaanii nageenya, badhaadhiinaa Itoophiyaa fi siyaasni hunda hammatuu akka uumamuuf akka hojjatuufi deegarsa akka taasiftu ibsaniiru. Lammiilee Itoophiyaa kaayyoo kanaaf hojjatan waliin hojjachu akka itti fufan himaniiru.
Ministirri Mummee Abiy umamee ilaalchisuun ibsa kan kennann guyyaa kana ture.
MM egaa fuula feesbuukii waajjira isaaniirratti maxxansaniin akka ibsaniitti, rakkinni nu mudateen walta'iinsaafi tokkummaan yoo waliin dhaabbannu malee daandiin keenyaa hangam rakkiisaafi sodaachisaa akka ta'e kan mullisuudha jedhaniiru.
Rakkina umamee ture bifa walitti bu'iinsa sabaafi amantaa akka qabaatuuf yaalameera. Kanaan kan ka'ees lammileen haala sukkaneessaa ta'een wareegamaniiru. Qabeenyaanis barbadaa'eera jedhan.
Manneen amantaa fi dhaabbileen daldalaas barbadaa'aniiru. Namoonni buuqaafamanis eddoowwan garaa garaatti dahatanii argamu. Haalli sukkanneessaan argaafi dhaggeettiitti hintollees lammileee keenyaarratti raawwateera.
Haala gaddisiisaa kanaan gaddinulleen lammiilee Itoophiyaa ammalleen faggeessaniin kan yaadaniifi hubattoota ta'usaanii agarree jirra. Waldaaleen akka hingubanneef musilaamooti yoo dhorkan, akkasumas masijidoonni akka hingubanneef kiristaanoota waardiyaa dhaabbatan qabna.
Akkasumas namoota saba isaantiin alaatiif kanneen aarsaa kanfalanis jiru.Nageenyaafi tasgabbii buusuuf jaarsooliin alkanii guyyaa dadhabaa jiranis qabna.
Namoonni waan harra umamee osoo hintaane waa'ee eegeree faggeessanii yaadaniifi miseensoonni raayyaafi poolisii seeraafi lubbusaaniif dhaabbatanis qabna.
Imala eegalee ittuma fufna. Aramaa buqqusaa miidhaa kunuunsaa adeemna malee aramaaf jecha miidhaan hingannuu. Haaluma walfakkaatunis rakkina nu mudate furaa bitaafi mirga osoo hinjennee imala keenya itti fufna. Nutis aarsaa barbaachisu hunda kanfaluun badhaadhina Itoophiyaafi ummata ishee kan fidu ta'u keenya, kanneen rakkina umaa jiran wanti isaan hinhubatiin.
Haala gaddisisaa umameen namoonni miidhaan irra gahee akka bayyanataniif, kanneen nama isaanitii buqqaafaman akka deebii'aniif, kanneen qabeenyaan isaanii jalaa barbadaa'eef ammoo deebiifamanii akka dhaabbataniif ummata waliin ta'uun ni hojjanna jedhan.
Kana malees, olaantummaa seeraa kabachiisuufi kanneen yakka raawwatan seeratti dhiyeessuuf ni hojjannas jedhaniiru.
Kanas fiixaan baasuun dhaabbileen amantaa, waldaaleen sivil fi ummanni hundi nu maddii dhaabbadhaa jechuunis waamicha dhiyeessaniiru.
Nuti yoo wal qoodne walitti buune kan moo'atu warra biraati. Eenyumti keenyaa hinmoonu. Diinoon keenya maal akka taanu akka barbaadan waanuma muraasaanu agarreera. Kan kana caalu akka hin uumameeneef ummanniifi mootummaan waan irraa eegamu bahachu qabaatu jedhaniiru.
Ministirri Mummee Abiy Ahimad, Ministirri Ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi itti Aanaani Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, bakka bu'oota jaarsoolii, haadhooliifi dagaggoo waliin kora tokkummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti gaggeessaniiru.